ज्योतिर्गमय A Movement toward East: November 2008
स्पेसटाइम दैनिक, वर्ष २ अंक ४८, २०५८ पुस ७ शनिवार, पेज नं. ४ मा प्रकाशित
यज्ञ शब्दसँग हामी परिचित छौं किनकि यो भारतवर्षको जीवनको एक अति प्राचीन र सर्वव्यापी अंग हो । तर के हामीलाई यसको वास्तविक अर्थको ज्ञान छ त ?
ऋग्वेदबाट थाहा लाग्छकि यज्ञ भारतवर्ष निवासीहरुको सर्वोच्च धार्मिक कर्म थियो । यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छकि संसारको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ ऋग्वेद हो- ऋग्वेदभन्दा पुरानो कुनै ग्रन्थ छैन । यो भारतवर्षीय धर्मको मूल आधार हो । यस्तो ग्रन्थमानै यज्ञको विधान गरिएकोबाट नै सनातन धर्म परम्परामा यस कर्मको महत्व स्वतः प्रमाणित छ । एक हिन्दूको जीवनमा जन्मदेखि मरणसम्म जति संस्कार हुन्छन् ती सबमा यज्ञ कुनै न कुनै रुपमा समावेश गरिएको छ । ऋग्वेदले यज्ञलाई मनुष्यको सर्वप्रधान धर्मकृत्य मान्दै यज्ञबाटनै जीवन सार्थक हुने बताएको छ । भगवद्गीताका अनुसार मनुष्यको जीवननै यज्ञमय छ । यति हुँदाहुँदैपनि हामीमध्ये कतिलाई यसको वास्तविक अर्थ थाहा छ त ?
वास्तवमा यज्ञ शब्दले व्यापक अर्थ प्रदान गर्दछ र यसका विविध स्वरुप छन् । यस कुरामा प्रष्ट हुनकालागि मनुस्मृतिको सन्दर्भ उपयोगी हुनेछ । मनुस्मृतिमा वेदाध्ययनलाई ब्रह्मयज्ञ तर्पणलाई पितृयज्ञ होमलाई देवयज्ञ अतिथि सन्तर्पणलाई मनुष्ययज्ञ भनिएका उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छकि मानव जीवनका सबै महत्वपूर्ण कर्तव्यहरुलाई यज्ञ नामले बुझाइएको छ । मीमांसा-दर्शनलेपनि यही कुरा आत्मसात् गरेको हामी पाउँछौं । गीताको सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा ... वाला श्लोकको तात्पर्य यही होकि प्रजाको प्रगति र कल्याणका सबै कार्य यज्ञरुप हुन् । चाहे ऋत्विजहरुद्वारा अग्निहोत्रका रुपमा गरियोस् अथवा दैनिक जीवन-निर्वाहका क्रममा कर्तव्यपालनका रुपमा गरियोस् यी सबै कार्य यज्ञ हुन् ।
एक अवधारणा यस्तो छकि जीवनको उत्थान देवशक्तिको कृपाले हुनसक्छ र देवशक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने मुख्य साधन यज्ञ हो । सांसारिक परिस्थितिमा रहेर जीवन निर्वाह गर्नेवाला हिन्दुकालागि देवाराधन मुख्य कर्तव्य हो र त्यसको माध्यम यज्ञ नै हो । गीतामा भगवान्ले भन्नुभएकै छ- यज्ञद्वारा देवता तिमीसँग प्रसन्न हुनेछन् र तिम्रो उन्नति तथा कल्याण गर्नेछन् । प्राचीनकालमा झैं दर्शपूर्णमास, ज्योतिष्टोम, अश्वमेध, राजसूय आदिजस्ता धूमधामका यज्ञहरु हुनेजस्तो स्थिति आज छैन तापनि यज्ञको व्यापक अवधारणाले यो सदा सान्दर्भिक छ । यज्ञको व्यापक अवधारणा अनुसार मानव-जीवनका सबै महत्वपूर्ण कर्तव्यहरु यज्ञ हुन् । मनुष्यको आफ्नो कर्तव्यलाई सच्चा हृदयले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर गर्नु नै वास्तविक यज्ञ हो । उदाहरणकालागि महाभारत शान्तिपर्वअनुसार प्रष्ट हुन्छकि समाजको अस्तित्व रक्षा र प्रगतिकालागि जतिपनि आवश्यक कार्य छन् ती सब यज्ञरुप नै हुन् । यस दृष्टिले यज्ञको विरोध कुनैपनि बुद्धिमान व्यक्तिले गर्ने ठाउँ छैन र कुनै विवेकी व्यक्ति यज्ञका विरुद्धमा बोल्दैन । यज्ञकै नाम लिएर कतिपय गलत कार्य गरिएका वा गराइएका देखेर साराकासारा यज्ञप्रति नकारात्मक सोंच राख्नु बेठीक हो । गलत पक्ष हटाउन हिच्किचाउनु हुँदैन- तर यज्ञको महत्ता अस्वीकार गर्नु त मुर्खता हो । जुनसुकै कर्म पनि यदि स्वार्थरहित भएर परोपकारार्थ गरिन्छ त्यसले मनुष्यलाई उच्चतातर्फ अग्रसर गराउँछ र सदैव कल्याणकारी हुन्छ । मुख्य कुरा भावनाको हो । यही सदैव कल्याणकारी भावना नै हो यज्ञीय-भावना, जसका साथमा साधारण कार्य पनि यज्ञकर्म हुन्छ ।
यज्ञको अर्थ तथा उपादेयता बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब स्वर्गको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । किनभने वेदमा स्वर्गकामोयजेत् भनिएकोहुँदा यज्ञ र स्वर्गको सम्बन्ध अभिन्न रहेको छ । शास्त्रमा ठाउँ-ठाउँमा स्वर्गको बारेमा चर्चा गरिएका छन् र स्वर्गको प्राप्तिका लागि विविध यज्ञहरुको विधान गरिएको छ । स्वर्ग भन्नासाथ मानिसहरु त्यसको अर्थ आकाशमाथिको अन्तरिक्षमा अवस्थित कुनै विशेष लोक भन्ठान्छन् । के यस्तो धारणा ठीक छ त मीमांसा-दर्शनले स्वर्गको यस्तो अर्थ मानेको छैन । भाष्यकार शवर स्वामीले स्वर्ग भनेको यस्तो विशेष लोक वा कुनै खास जमिन नभएको र निरतिशय सुखलाई नै स्वर्ग भनिएको हो भनेर स्पष्ट पारेका छन् । अर्थात् स्वर्ग प्राप्त गर्ने भन्नाको अर्थ कतिपय मानिसहरुले जुन किसिमले - मरेपछि पुण्यात्मा व्यक्ति स्वर्गमा पुगेर त्यहाँ अप्सराहरुका साथमा बसी सम्पूर्ण सुख-सुविधा भोग गर्न पाइन्छ आदिइत्यादि भन्ने गरेका छन् त्यो ठीक होइन । स्वर्गको जुन किसिमले बयान गरिने गरेको छ त्यो वास्तविक स्वर्ग-तत्वभन्दा निक्कै तुच्छ छ । ऋषिहरुले आफ्नो ज्ञानदृष्टिबाट वैदिक मन्त्रद्वारा प्रतिपादित धर्मलाई आत्मसात् गरी हामीलाई जुन उपदेश दिएका छन्- त्यसको उद्देश्य मरेपछि अर्को लोकमा गएर सोमरस पिउने अप्सराहरुसँग भोगविलास गर्ने धन-ऐश्वर्य उपभोग गर्ने भन्नु त ती महान् ऋषिजनप्रतिको अपमान हो किनकि यस्ता कार्य त यहीँ यसै लोकमा अधर्मीहरुले पनि गर्न सकेकै छन् नि ! भनेपछि धर्मकर्मको उद्देश्य यति सामान्य चीज पक्कै होइन -स्पष्टै छ । हाम्रा धर्मशास्त्रहरुले, हाम्रा ऋषिमुनिहरुले हामीलाई जुन उपदेश दिएका छन् त्यसको उद्देश्य समस्त मनुष्यको आत्मकल्याण हो । तसर्थ यिनले क्षणिक भौतिक सुखलाई गौण मानेका छन् र दुःखको समूल नाश अर्थात् दुःखको निवृत्तिलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यही दुःखको निवृत्ति पश्चात्को निरतिशय सुखको अवस्थामा प्राप्त हुनुलाई नै स्वर्ग प्राप्ति भनिएको हो । भगवान् बुद्धको शब्दमा यसैलाई निर्वाण भनिएको छ । सनातन-हिन्दू मीमांसा-दर्शनले यज्ञ तथा स्वर्ग सम्बन्धमा वैज्ञानिकताले परिपूर्ण अवधारणा दिइरहेको हामी पाउँछौं । तर जनसमुदायमा तिन्का सही अर्थ नभएर विकृत वा निम्नस्तरीय अर्थ प्रचलित रहेका छन् जसलाई मेटेर सही अर्थ बुझाउने कार्य निक्कै-निक्कै कठिन कार्य हो । तर जतिनै कठिन कार्य भएतापनि यो कार्य गरिनु जरुरी छ । जबसम्म मरेपछि स्वर्ग गएर सोमरस पिउने र अप्सराहरुसँग भोगविलास गर्ने भन्नेजस्ता तुच्छ धारणाहरु फैलिन पाइरहन्छन् तबसम्म वेदमा स्वर्गकामोयजेत् भनेर लक्षित गरिएको स्वर्गजस्तो महान् प्राप्तिको बेइज्जत भइनै रहनेहुँदा यसखाले भ्रान्तिलाई जतिसक्दो चाँडो हटाउनु पर्दछ ।
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 8:12 PM0comments links to this post
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 8:21 PM0comments links to this post
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 1:29 AM0comments links to this post
अवतारवाद हाम्रो संस्कृतिको विशिष्ट अवधारणा हो । पुराण महाभारत तथा रामायण जस्ता ग्रन्थमा विभिन्न ईश्वरीय अवतारका कथा, गाथा प्रशस्त भेटिइन्छन् । बौद्ध जातककथाहरु पनि अवतारका विविध कथाहरुले भरिएका छन् । अवतारवादको कारणले हाम्रो संस्कृति एवं वाङमय समृद्ध बन्न सकेको पाइन्छभने यसकै कारणले कतिपय द्विविधा अन्यौलको स्थिति पनि नआएको होइन । धर्मशास्त्रमा वर्णित विविध अवतारका रहस्य बुझ्न नसकेर ती शास्त्रप्रतिनै अनास्था प्रकट गर्न भ्याउने मूर्खतापूर्ण कार्य गर्नेहरुपनि छन् । अर्कातिर धर्मशास्त्रका आधिकारिक विद्वान भनाउँदा महाशयहरुले जनसमुदायलाई त्यसको रहस्य छर्लङ्गयाउन जाँगर नचलाइदिँदा धर्मशास्त्रमा विश्वास राख्नेहरुको दिमाग पनि कम चक्कराउने गरेको छैन । यतिका अस्पष्टता एवं द्विविधा हुँदाहुँदैपनि न अवतारवादको अवधारणा कमजोर भएको छ न त जनसमुदायले ईश्वरीय अवतारहरुप्रतिको आफ्नो आस्थालाई तोडेको छ । हाम्रो धर्म-संस्कृतिलाई त्यस्सै सनातन भनिएको कहाँ हो र ।
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 9:31 PM0comments links to this post
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 8:01 PM0comments links to this post
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 8:33 PM0comments links to this post
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 8:58 PM0comments links to this post
स्पेसटाइम दैनिक, वर्ष १ अंक २६९, २०५८ साउन १३ शनिवार, पेज नं. ६ मा प्रकाशित
पूर्व ः सूर्योदय उज्यालोको प्राप्ति ।
पश्चिम ः सूर्यास्त अन्धकारमा पतन ।
पूर्व हुनु र पश्चिम हुनु बीचको भेद नै यस्तो छ कि प्रत्येक चेतनशील व्यक्ति पूर्वतिर अभिमुख हुन उत्पे्रित भइहाल्छ । जीवनलाई जगतका असल पक्षहरुले सुवासित पार्दै विशिष्ट आयाम तर्फ लम्कनुमा जीवनको सार्थकता छैन भनेर कसैले भन्छ भने ऊप्रति टीठ मान्न मात्र सकिन्छ ।
अहिले आधुनिकताको परिभाषा गर्ने ठेक्का लिएकाहरुमध्ये कतिपयले भन्नेगरेको आधुनिकतासँग ठाडो विमति छ मेरो । एउटा बेतुक पाखण्डी र धेरैहदसम्म घृणायोग्य समाज विकसित गर्न चाहन्छन् तिनीहरु ।तब म कसरी सहमत हुन सक्छु स्वतन्त्रताको नाममा बेलगाम स्वच्छन्दता स्थापित नैतिक मूल्यमान्यता व्यर्थ भ्रष्टीकरण पुरानो पुस्ताको अपमान परम्पराको बिना कुनै उचित कारण उल्लंघन आधुनिकताको जामा पहिरेर अगाडी आएका यस्ता उद्दण्डतालाई म ठाडै अस्वीकार गर्छु । त्यस्ता कुराको विरोध गर्दा पुरातनपन्थी भइन्छभने प्रतिगामी भनिइन्छभने पनि मलाई केही भन्नु छैन । मेरो बाटो त स्पष्ट छ ः सत्य को प्राप्तिका निम्ति अगाडी बढ्न तयार भएझैं यदि त्यो सत्य प्राप्त गर्न पछाडी फर्कनु पर्ने भएमापनि म हिच्किचाउनेवाला छैन किनकि अगाडी वा पछाडीको विवाद मेरो निम्ति उतिसाह्रो महत्वपूर्ण होइन र सत्यप्राप्ति नै मूल कुरा हो । पश्चिम होइन पूर्वतिर भनिरहँदा म पूर्वनिश्चित सरलरेखामा जकडिएको छैन । हरेक उपयुक्त विकल्पका निमित्त ढोका खुला राखिएको छ ।
अहिले हिन्दूका रुपमा बढी विख्यात हामीहरुका पूर्वज महान् वैदिक ऋषि महर्षिहरुले हजारौं हजारौं वर्ष अघि भनिछाडेका छन् कि कलियुगमा लडाइँ हावा विचार तरंग मार्फत् हुनेछ । रेडियो टी। भी। टेलीफोन इन्टरनेट जस्ता माध्यमहरुले विचार तरंगको प्रवाहलाई जति सजिलो बनाउँदै छन् उति मानव समाजमा लडाइँका नयाँ नयाँ निहुँहरु उब्जँदै छन् । नेपाल भारत चीन श्रीलंकामध्यपूर्व होस् या युरोप अमेरिका जहाँ हेरेपनि यदि युद्ध भएको छ त हरेक युद्धका पछाडी कुनै न कुनै खाले विचारले निर्देशित गरेको छ । शस्त्रास्त्र आज दोश्रो तहको कुरा भएको छ र अतिवादी विचार पहिलो तहको । विचारहरु नमिल्दा तिन्को प्रकटीकरण शस्त्रास्त्रका माध्यमले भइरहेका छन् र यदि मानव समाजलाई युद्धको विभिषिका त्रासदीबाट मुक्त पार्ने हो भने यसको उपचार विचारको सूक्ष्मतहमा मानसिक गहिराइमा पुगेर गरिनु आवश्यक छ । र यस्तो उपचार गर्ने सामथ्र्य पूर्व सँग छ । शान्ति मैत्री करुणा र प्रेमका विचारतरंगको दिग्विजयले नै मानव अन्तरमनमा निहित िहंस्रकतालाई समूल नष्ट गर्न सक्छ । त्यसो गर्नका निमित्त वेदका संवदध्वं संगच्छद्ध्वं……… आज झन् आवश्यक छन् । सर्वे भवन्तु सुखिनः अझ गुिाजनु जरुरी छ । त्यो बाटो जुन वेद उपनिषद् गीताआदि द्वारा दिग्दर्शित छ त्यो बाटो जुन बाटो िहंड्नुमा नै मानवनीवनको सार्थकता छ ।
तपाईंलाई रातो रंग मन पर्ला उहाँलाई नीलो रंग मन पर्ला र अझ अर्को व्यक्तिलाई पहेँलो रंग मन पर्ला । ठीक छ आफूले मन पराएको चीज राम्रो भन्न पाउनु हुन्छ । तर तपाईंलाई अर्काको अनादर गर्ने हक छ भन्ने म ठान्दिनँ । के देखियो भने अल्लाहका नाममा मन्दिरहरु ध्वस्त पारिए र मूर्तिहरु अनि येशूख्रीष्ट जीसस क्राइस्ट का नाम लिएर अरु धर्मउपर दुर्भावना फैलाउँदै र गलत हतकण्डा अपनाई धर्मान्तरण गराइएको पनि देखिए । यस्ता तरिकाहरुलाई कदापि ठीक मान्न सकिदैन । यस मामिलामा अपवादलाई छाडेर हिन्दूहरु धेरै सहिष्णु उदार भएको देखिन्छ । सनातनधर्ममा निहीत सहिष्णुता उदारता तथा व्यापक ग्रहणक्षमता नै मानव समाजलाई धर्म पन्थ तथा मजहबका नाममा हुने गरेका त्रासदीहरुबाट मुक्ति दिलाउने आधार हुनसक्छ । मलाई थाहा छ मेरो छवि सनातनधर्म हिन्दूधर्म को प्रबल पक्षधरका रुपमा प्रचारित गरिएको छ तर मेरो विचारको उच्चतर स्वरुपलाई तोडमोड गर्ने गरिएको छ कि धर्मका रुपमा इसाई इस्लाम शिख जैन बौद्ध बोन शिन्तो वा अरुहरु कुनैप्रतिपनि मेरो पूर्वाग्रह छैन र प्रत्येक धर्मलाई म आदर गर्छु । आफ्ना पूर्ववर्ती महान् आर्य ऋषिमहर्षि सन्त महात्मा योगी ईश्वरीय अवतार आदिप्रति गौरव गर्ने म पैगम्बर मोहम्मद येशूखि्रष्ट जरथुस्त्र कन्फ्युशियस आदिप्रति पनि पूर्वाग्रहबाट मुक्त छु । सत्यपथ का सामान्य भन्दा सामान्य र महान् भन्दा महान् व्यक्तित्वप्रति मेरो अपनत्व आदरभाव तथा प्रेमभाव छ । हाम्रो महान् संस्कृतिले मलाई हरेक धर्मको मूल लक्ष्य मानवकल्याण हो भन्ने उदार व्यापक विश्वदृष्टि प्रदान गरेको छ । तर कसैले हाम्रो संस्कृति परम्परा स्थापित मूल्य मान्यता माथि चोट पुर्याउँछ भने प्रहार गर्छ भने त्यसको सशक्त प्रतिवाद तथा प्रतिकार हुनुपर्छ त्यो मैले गर्ने गरेको छु । मैले सत्य को पक्ष लिइरहँदा यसबाट तसर्िएकाहरु मेरो विरोध गर्छन् त यसमा के नौलो कुरा छ र मैले बत्ती बाल्न खोज्दा अँध्यारोका पक्षधरहरु यसलाई निभाउन प्रयत्न गर्छन् भने यो त उनीहरुको चरित्र अनुरुपकै कार्य हो । हो तिनीहरुसँग मैले हार्नुचाहिँ हुँदैन ।
मैले बारम्बार भन्दै आएको छु कि धर्मको अर्थ कुनै ट्रेडमार्कमा गर्नखोज्दा धर्म टे्रडमार्कमा राम्ररी अर्थँदैन । आज हामी धर्म भन्नासाथ हिन्दू हो कि कि्रश्चियन हो कि इस्लाम हो कि शिख हो कि जैन हो कि बौद्ध हो कि भन्नेतिर जान्छौं । मानव इतिहासमा यी ट्रेडमार्क ९तचबमझबचप० मात्रै हुन् र असली धर्मतत्व लाई यसको जरुरत पर्दैन असली धर्मतत्व मूलतः एउटै हो । परन्तु असली धर्मतत्व मूलतः एउटै भएको जान्दाजान्दैपनि वेद उपनिषद् गीता आदिको उत्तराधिकार बोकेको सनातनधर्म हिन्दूधर्म प्रति मेरो विशेष अनुराग छ । यसको उपयुक्त कारण छ । अर्थात् हिन्दुत्वप्रतिको मेरो अनुराग पूर्णतया औचित्ययुक्त छ । मैले पश्चिम होइन पूर्वतिर भन्दाखेरि त्यो अनुराग झल्कन्छ भने त्यसमा मलाई खुशी लाग्नेछ ।
एउटा घटना यस्तो सुनिएको थियो कि एकजना फुटबल खेलाडीले खेलको क्रममा आफैले हानेको फुटबल फर्केर आई छातीमा लागेर मुर्छा परेकाले उपचारार्थ अस्पताल लाँदा बाटैमा मृत्यु भयो । यो घटना मलाई एकदम सन्देशमूलक लाग्यो आफैले हानेको बल फर्केर आई आफ्नै छातिमा लागेर खुत्रुक्कै मर्नु हो यस्तै भइरहेको छ अहिले । मान्छेले जतिजति विकसित भएँ आधुनिक बनें प्रगति गरें भन्दैछ उतिउति त्यै तथाकथित विकास आधुनिकता प्रगति चाहिँ फरक्क फर्केर मानवसभ्यताको छातिमै ठोकिएर खुत्रुक्कै पार्दैछ ।
जस्तो कि हिन्दूहरुका स्थापित नैतिकमूल्यमान्यता अनुसार परस्त्रीसँग यौनसंबन्ध राख्नु त के कुरा वासनात्मक भावना राख्नु समेत निषेध छ जुन नियम पालना गर्दा मानवसमाजका लागि एड्स जस्तो रोग कुनै समस्या होइन । यो त्रासदीपूर्ण समस्या त तथाकथित आधुनिक सभ्यताले फैलाएको हो र फैलाइरहेको छ । अथवा आज संसारभरिनै वृद्धवृद्धाहरु उपेक्षा निरादर तिरस्कारपूर्ण जीवन बिताइ रहेकाछन् । किन त यसमा पनि उस्तै कारण छ । हाम्रो परम्परा पुण्डरिक श्रवणकुमार आदि जस्ता मातृपितृभक्तहरुको परम्परा हो । श्रवणकुमारको कथा सुन्नु भएकै होला कि उनले आफ्ना अन्धा मातापिताको कस्तो सेवा गरे । पुण्डरिकको कथा पनि सुन्नुभएकै होला जसले मातृपितृ सेवाका निम्ति भगवान् विष्णुलाईसमेत पर्खन भने र आखिर स्वयम् भगवान् नै उनको कुटीमा जानुभयो । यी कथाहरुमात्रै होइनन् यिनमा हाम्रा संस्कार सभ्यता संस्कृति दर्शिएका छन् । यो परम्परामा वृद्धाश्रमको जरुरत पर्ला त निश्चितरुपमा पर्दैन । अहिले पश्चिमा देशहरुमा जस्तै पूर्वमा पनि विवाह गर्नासाथ मातापितालाई त्याग्ने गलत संस्कार देखिन थालेको छ । जसले बुढेसकालमा उनीहरुलाई अलपत्र पारेर आफूचाहिँ ऐशआराममा रमाउँछ र स्वार्थका लागि गधालाई बा र बालाई गधा भन्न सक्छ त्यो चाहिँ आधुनिक अरे सभ्य अरे । अरुपनि उदाहरण छन् जहाँ पश्चिमा भौतिकवाद उन्मुख सभ्यताले गर्दा मानव समाज गलत बाटोमा दौडिरहेको छ । त्यो बाटो मानव विनाशको बाटो हो ।
मैले पश्चिम भनिरहँदा यसमा पूँजीवाद पनि आरोपित छ । पूँजीवादले मानव समाजको समष्टिमा हित गर्न सक्दैन र सकिरहेको छैन भन्ने मेरो मत छ । त्यसोहुँदा पूँजीवादको पतन अवश्यम्भावी छ । तर यसको अर्थ कम्युनिष्ट समेतका माक्स्रपन्थीहरुले भनेझैं पूँजीवाद नष्ट भएर समाजवाद नौलोजनवाद साम्यवाद आउनेछ भन्नेमा पनि मेरो रत्तिभर विश्वास छैन । मानव समाजको निमित्त सर्वोत्तम व्यवस्था रामराज्य एवं सत्ययुग नै हो । तसर्थ म रामराज्य एवं सत्ययुगको पक्षधर हूँ । पूँजीवाद कम्युनिज्म समाजवाद सामन्तवाद आदिइत्यादि प्रति मेरो अनिच्छाभाव जगजाहेर छ । मेरो लागि जसरी पूँजीवाद पश्चिम हो उसरी नै कम्युनिज्म पनि पश्चिम नै हो । हरेक राम्रा कुरा पूर्व हुन् मेरालागि । अनि मेरो बाटो ः पश्चिम होइन पूर्वतिर । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अर्थराजनैतिक कोणबाट भन्नुपर्दा पश्चिम होइन पूर्वतिर भनिरहँदा मैले पूँजीवाद र कम्युनिज्म दुबैमा निहीत केहीकेही राम्राचाहिँ तत्वहरुलाई स्वीकार पनि गरेको छु । मानव समाजमा यसअघि अस्तित्वमा आएका हरेक प्रणालीका हरेक दर्शनका सकारात्मक पक्षको स्वीकार र नकारात्मक पक्षको अस्वीकार बाट हाम्रो पथ सुदृढतापूर्वक निर्माण भएको छ । यसो भनिरहँदा यस पथलाई कतिपयले सारसंग्रहवादी वा खिचडी भन्ने मुर्खता पनि गर्न सक्छन् त्यस्तो बेतुके भनाइको खण्डन गरिरहनु जरुरी छैन । मैले माथिनै भनिसकेको छु कि म माथि आरोप लगाइँदा मेरो आलोचना उपेक्षा अनादर तिरस्कारले म विचलित हुन्नँ । हो आफ्ना कमी कमजोरी दूर गर्न म जागरुक छु र हुन चाहन्छु । शत्रुतारहित स्वस्थ स्वच्छ रचनात्मक तथा प्रेमपूर्ण समालोचना म सदा स्वीकार गर्दछु ।
राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गर्दा म भारतवर्षका महान् राजनीतिज्ञ चाणक्यलाई सम्झिरहेछु । एकपल्ट केही व्यक्ति उनलाई भेट्न गएछन् । उनी केही काममा व्यस्त थिए । पाहुनाहरु आएको देखेपछि चाणक्यले तिनीहरुको स्वागत गरे अनि बलिरहेको बत्ती निभाएर अर्को बत्ती बाले र पाहुनाहरुसँग भलाकुसारी गर्न थाले । आगन्तुकहरुलाई बडो आश्चर्य लाग्यो कि किन यसो गरे । एउटालाई त साह्रै सकसक लागेकाले सोधिहालेछ । चाणक्यको जवाफ यस्तो थियो भनिन्छ ः अघिसम्म म सरकारी काम गर्दैथिएँ त्यसैले राज्यको खर्चबाट तेल हालिएको बत्ती बालेको । अहिले तपाईंहरुसँग व्यक्तिगत भलाकुसारी हुँदैछ त्यसैले व्यक्तिगत खर्चबाट तेल हालिएको बत्ती बालेको ।
यी हुन् पूर्वीय संस्कार सभ्यता संस्कृति अनुकुलका राजनीतिक नेता । हाम्रो नेपालमा सम्पूर्ण जनताले खाना खाएपछिमात्रै आफूले पनि खाना खाने र एकजना प्रजा पनि भोको नरहोस् भनी हरक्षण चिन्तनशील रहने राजा महीन्द्र मल्ल को कीर्ति प्रसिद्ध छँदैछ । पृथु र जनक जस्ता राजाको प्रजावत्सलता पनि उत्तम उदाहरणीय छ । यद्यपि बेन र कंस जस्ता प्रजापीडक अत्याचारी शासक पनि यहाँ थिए । जन्मका हिसाबले जहाँकहिँका भएतापनि चाणक्य महीन्द्र मल्ल पृथु जनकहरु पूर्वपट्टि पर्छन् भने बेन कंस तथा रोम शहर जलिरहँदा पनि खुशी भएर बाँसुरी बजाइरहने राजा नीरोहरुचाहिँ पश्चिमपट्टि पर्छन् । अनि हामी पश्चिम होइन पूर्वतिर भन्दैछौंभने कस्तो राजनीतिक नेतृत्व हामी चाहन्छौं भन्ने कुरा प्रष्ट छ । मैले माथि रामराज्य भन्दाखेरिमा प्रणाली र नेतृत्व दुबैमा सही छनोट को ख्याल राखेको छु ।
प्रणाली र नेतृत्व एकअर्काका परिपूरक हुन् । एउटा गलत हुनासाथ अर्कोको परिणाम पनि हितकारी हुनसक्दैन । तसर्थ हामीले प्रणाली र नेतृत्व दुबैको सही छनोटमा जोड दिएर पश्चिम होइन पूर्वतिर भनेका हौं ।
अझैसम्मपनि लोककल्याणकारी राज्यको सर्वाधिक आदर्शमय स्वरुप रामराज्य नै हो । भगवान् श्रीरामले शासकका रुपमा प्रयुक्त गर्नुभएको शासनशैली तथा राज्यव्यवस्था वास्तवमै पुनःपुनः अनुकरणीय छ ।
भगवान् श्रीरामलाई मर्यादापुरुषोत्तम भनिएको तथा रामराज्यलाई सर्वोत्कृष्ट प्रणाली मानिएको कारणलाई हामीले ठीक तवरले बुझ्नु जरुरी छ । यदि तपाईं यस्तो सोच्नुहुन्छकि रामले रावणमाथि विजय हासिल गरेको तथा अनेकौं राक्षसहरु संहार गरेको हुनाले उहाँ सुपूजित हुनुभएको हो तब तपाईं गल्तीमा हुनुहुन्छ । त्यसो होइन । मार्नु काट्नु सुयशको कार्य होइन । नरसंहार क्षमतालाई मात्रै विशिष्टता वा महानताको कारण भन्ठान्नु अन्यायपूर्ण हो । हामीलाई थाहा छ रावणबध पश्चात् भगवान् श्रीरामले कहिल्यै शस्त्रास्त्र उठाउनु भएन । रावणबध तथा त्यसअघिका िहंसा अनिवार्यताका स्तरका थिए । श्रीराम शासनारुढ भएपछि संसारभरि शान्ति सुव्यवस्था कायम भयो । शोक सन्ताप मेटिएर सबैजना सुखी भए । सुख अर्थात् रोग भोक शोक भय आदिबाट मुक्ति । उहाँको राज्यमा कोही दरिद्र थिएन सबकासब समृद्ध । सबै गुणवान् शिक्षित । कसैको कसैप्रति द्रोह वैरभाव थिएन रामराज्यमा । कोही धनी र कोहीचाहिँ गरिब हुने अन्यायपूर्ण वितरणप्रणाली नै थिएन त केको विषमता मजदुर पनि थिए किसान पनि थिए तर कामका दृष्टिकोणबाटमात्र । प्रत्येक मजदुर किसान त्यतिनै धनी थियो जतिकि महाराजाधिराज श्रीरामचन्द्र ।
मार्कसका अनुयायीहरुको साम्यवाद -कम्युनिज्म फगत् कल्पनामात्रै हो यस्तो लक्ष्य हो जो यसअघि हासिल भएको छैन र भविष्य पनि सुनिश्चित छैन । अर्कातिर आफूलाई प्रजातान्त्रिकसमाजवादी बताउनेहरुको स्थिति त झन् हास्यास्पद भइसकेको छ । प्रजातान्त्रिकसमाजवाद भनेतापनि व्यवहारमाचाहिँ पूँजीवादकै पिट्ठु भएको देखिन्छ । तर रामराज्य त वास्तविकता हो । वास्तविकसाम्यवाद हो रामराज्य।
रामराज्यको अझ उच्चतर विकास हो ः हिन्दूधर्मशास्त्रहरुमा उल्लेखित सत्ययुग । यस युगमा मानवसमाजले समस्त अभावहरुमाथि विजय प्राप्त गरेको हुन्छ र समाज भोक रोग शोक रहित हुन्छ । सत्ययुग मा राजनीतिक सीमारेखाहरुको अर्थ हुनेछैन संप्रदाय पन्थ मजहबहरुको घेराबन्दीले पनि अर्थ राख्नेछैन जाति र भाषाका भेदले पनि अर्थ राख्दैन । त्यहाँ कोही मालिक र कोही दास हुँदैन कोही धनी र कोही गरिब हुँदैन कसैले कसैलाई हैकम चलाउने हुँदैन । सत्ययुगमा प्रहरी र सेनाको आवश्यकता रहँदैन मानवसमाज स्वतः नैतिक नियममा गतिशील रहनेछ । यहाँसम्मकि तालाचाबीको कुनै उपयोगिता रहँदैन कोही चोर नै रहने छैन त किन चाहियो तालाचाबी कुनै शस्त्रास्त्रको उपयोगिता नरहने हुन्छ किनकि िहंस्रक मनोवृत्तिबाट मानवले आफूलाई मुक्त पारिसकेको स्थिति हुन्छ । सर्वत्र सुख शान्ति आनन्द । मैले पश्चिम होइन पूर्वतिर भनेर लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था देखि रामराज्य र सारमा सत्ययुग सम्मको यात्रालाई दिग्दर्शित चाहेको छु । पूर्वतिर भन्दा सत्ययुगतिर भन्ने बुझ्नुभयोभने मलाई धेरैहदसम्म बुझ्नुभएको छ ।
धर्मका नाममा मानवसमाजलाई शोषण गर्ने लुट मच्चाउने र अनाचार अत्याचारलाई पर्दा हाल्नेगरिएको देखिएकै कुरा हो । कतै पण्डाहरुको बिगबिगी कतै पोपपादरीहरुको अनाचार त कतै मुल्लामौलवीको अत्याचार । चाहे जुनसुकै धर्मका नाममा अघि सारिएका होऊन् गलत कुराहरुको उन्मूलन हुनैपर्छ । ढ्याउअ डकारेर भूँडीपल्टाउने मठाधिश शरियतको आडका मान्छे चुस्ने मौलवी ब्वाँसोलेझैं खेलाई खेलाई शिकार गर्ने पादरी यी सबैलाई घृणा गर्नु र बच्नु पर्छ । तर यस्ता विकृतपक्ष मात्रै चर्चा गरेर धर्मतत्व विरुद्धमा लाग्नु चाहिँ मानवसमाजको दूर्भाग्य हुनेछ । कसैले धर्मको दुरुपयोग गर्यो भन्दैमा धर्म भनेकै खराब भन्नेजस्तो निष्कर्षमा पुग्नु झन् खराब हो । सुनका गहनामा कस मयल लागेपनि सुन आफैमा सुन नै हुन्छ । हो यसमा लागेको कसचाहिँ फाल्नैपर्छ । त्यस्तै धर्मसँगको मानवसमाजको संबन्ध नकार्नु हुँदैन । हामीले त धर्मतत्व आत्मसात् गर्ने दिशातर्फ आफूलाई अग्रसर गराउनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मत छ ।
म वैज्ञानिकताले परिपूर्ण धार्मिकताको पक्षपाती हूँ । धर्म र विज्ञान एउटा बिन्दुमा मिल्नुपर्छ मिल्छन् । धर्मको शुद्ध स्वरुप र विज्ञानको पनि शुद्ध स्वरुप छर्लंग हुँदा यी दुईको एकत्व सहजै दृष्टिगोचर हुन्छ । एक्लो धर्मको अनुशरण गर्छु भन्दा मान्छे मजहब संप्रदाय पन्थ रेलिजनमा जकडियो र एक्लो विज्ञानको अनुशरणले चाहिँ अन्धभौतिकतावादको भासमा खस्यो । धर्म र विज्ञान मध्ये एउटा मात्र स्वीकार्ने अतिवाद मानवसमाजका निम्ति अहितकारी छ । धर्म र विज्ञानको एकत्वमा मानवसमाजको हित निहित छ । धर्मको पक्ष वजनदार कारणमा प्रमुख कारण के पनि हो भने मानवसमुदायलाई उसको उज्ज्वल भविष्यका निम्ति धर्म तत्वको आवश्यकता झन् बढेको छ । मलाई के लाग्छ भने मानवले जति बढी विज्ञानको विकास गर्नेछ र जति बढी मात्रामा शक्तिसंपन्न हुन्छ त्यतिनै बढी मात्रामा उसलाई धर्मतत्व आवश्यक हुन्छ । विज्ञान र धर्मका बीच सामाजस्यताले सम्पूर्ण मानवसमाजमा प्रकाशमय प्रभाव पार्नेछ । तसर्थ मैले पश्चिम होइन पूर्वतिर भन्दाखेरि विज्ञान र धर्मबीचको एकतालाई विशेष जोड दिएको छु । अर्थात् धार्मिकता युक्त विज्ञान र वैज्ञानिकतायुक्त धर्मको सुनिश्चितता छ यसमा ।
म यहाँ कुनै नयाँ कुरा गरिरहेको छैनँ र केही विशिष्ट मौलिकता हुँदाहुँदै पनि मेरा सिद्धान्त पूर्णतया नयाँ आविष्कार होइनन् । म संसारलाई कुनै नयाँ कुरा भनिरहेको छैन र कुनै नयाँबाटो देखाइरहेको छैन किनकि सत्य त अनादिकाल देखि छँदैछ र अनन्तकाल सम्म रहनेछ । म त्यही सत्यपथ को यात्री हूँ । हो यो सत्यपथमा िहंड्ने अधिकार प्रत्येक प्राणीलाई छ । यदि कोही भ्रमित भएर पथभ्रान्त बनेकोछभने उसलाई सत्यपथतर्फ आह्वान गर्नु मेरो र मेरा साथीहरुको कर्तव्य हो । म त्यो कर्तव्यपालन गर्न चाहिरहेको छु ।
कसैले मलाई चुनौती दिनसक्छकि तपाईंले भनेको बाटो नै सत्यपथ हो भन्ने के ग्यारेण्टी छ यसमा कुनै अनौठो कुरा छैन । यो प्रश्न भगवान् बुद्धलाई पनि तेस्र्याइएको थियो । यही प्रश्न जीससक्राइष्टलाई पनि तेस्र्याइएको थियो । यस्तै प्रश्न पैगम्बरमोहम्मदलाई पनि तेस्र्याइएको थियो । भगवान् श्रीकृष्ण पनि प्रश्न गरिनबाट बाँकी राखिनुभएन । संसारमा मानवसमाजमा प्रत्येक महान् व्यक्तित्वहरु प्रश्नको घेरो नतोडी आएका छैनन् । जगद्गुरु शंकराचार्य पनि यसको अपवाद रहनुभएन । सुकरात प्लेटो अरस्तु जरथुस्त्र कन्फ्युशियश देखि कबीर मीरा महावीर नानक अनि ओशोरजनिश सम्म कोप्रति लक्षित भएनन् प्रश्नहरु यद्यपि म आफ्नो कुनै विशिष्टताको दाबी गरिरहेकोछैन भनेर मैले भनिसकेको छु । म मेरो विश्वासमा उत्तिकै दृढतापूर्वक कायम छु कि मेरो प्रज्ञादृष्टिले जुन बाटो ठम्याएकोछ त्यो मानव समाजका निम्ति सही र सर्वोत्तम बाटो हो ।
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 1:14 AM0comments links to this post
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 9:05 PM0comments links to this post
हाम्रो सर्वाभ्युदयको उपाय के हुन सक्छ यस्तो प्रश्न मानवले उहिल्यैदेखि गर्दैआएको छ । आफ्नो उन्नति प्रगति अभ्युदयकालागि प्रयत्नशील रहनु चेतनशील मानवको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो । आधुनिक युगमापनि सो प्रश्नको सान्दर्भिकता उत्तिकै छ । हरेक युगको मान्छेलाई आफ्नो जिन्दगीको सार्थकताको सवालले झक्झक्याइरहेको हुन्छ र हुनुपनि पर्छ । उत्तर चािहं व्यक्तिपिच्छे फरक फरक आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । यस स्तम्भकारले देखेको बाटो त उही हो- वैज्ञानिकतायुक्त धर्म एवम् धार्मिकतायुक्त विज्ञान धर्म र विज्ञानको समन्वय को बाटो । उही हामीले पहिल्यैदेखि भन्दैआएको पश्चिम होईन पूर्वतिर । के छैन यसमा कुनचािहं पाटो कमजोर छ यसमा सबथोक छ प्रत्येक पाटो परिपुष्ट छ ।
खासगरी हाम्रो हित हिन्दूदर्शनको पुनरुज्जीवनमा निहीत छ यानेकि सांस्कृतिक पुनर्जागरण । धर्मको नाममा व्यापार गर्ने तथा धर्मको नाममा नेतागिरीको व्यवसाय चलाउनेहरुले हिन्दू शब्दलाई तानातान पारेर जनमानसमा यसको अर्थ नै क्षतविक्षत तुल्याएका छन् । अर्थको अनर्थ गरेपछि त ताल बिगि्रहाल्छ नि ! ठीक ठाउँमा ठीक पुर्जा फिट गरे पो इन्जिन चल्छ । जता जता मन लाग्छ त्यता त्यता जे जे मन लाग्छ त्यै त्यै फिट गरेर इन्जिन चलाए पछि दूर्घटना हुँदैन त भइहाल्छ नि । त्यस्तै हो समाज पनि । समाजका हरेक पक्ष खल्बल्याए पछि परिणाम पनि खल्बलिन्छ । विष रोपेको ठाउँमा अमृत फल्दैन । सत् बाट मात्र सत्् जन्मन्छ । जब त्यो सत्लाई बेवास्ता गरेर असत्लाई सत्को जामा पहिराइन्छ अनि गडबड हुन्छ । त्यो गडबडी हामी यत्रतत्र देख्न सक्छौं । हिन्दू शब्दलाई लगेर जोडिदिएका छन् एउटा टे्रडमार्कमा । ठिक छ यदि ट्रेडमार्कहरु बिचबाटै छान्नुपर्ने हो भने राम्रै ट्रेडमार्क छानौं न यो मेरो आग्रह । त्यो राम्रँे ट्रेडमार्क भनेको कुन त मेरो जवाफ प्रष्ट छ - महान वैदिक सभ्यताको उत्तराधिकार जुन ट्रेडमार्कमा छ त्यही । अँध्यारोबाट उज्यालोतिर असत्बाट सत् तिर मृत्युबाट अमृततिर जाने बाटो देखाएको छ जुन दर्शनले त्यही हो मेरो रोजाइ ।
धर्म वा दर्शन जस्ता भावहरुलाई भौतिक जगत्मा हाम्रा भौतिक कि्रयाकलापहरुले प्रदर्शित गरिरहेका हुन्छन् । यहाँ दोहोरो सम्बन्ध छ । दार्शनिक रुपमा हामी उच्चस्तरको हुँदा हाम्रो भौतिक स्तर पनि उच्चतातर्फ हुन्छ भन्ो भौतिक रुपमा हामी उच्चस्तरमा हुँदा हाम्रो दर्शन पनि उच्चता तर्फ लागिरहेको हुन्छ । जस्तो कि पश्चिममा जुन मात्रामा भौतिक विकास बढ्दो छ उति नै हिन्दू दर्शन प्रति आकर्षण बढ्दो छ । हामीचािहं यसै महान् दर्शनका उत्तराधिकारी भएर पनि भौतिक रुपमा किन पिछडियौं त प्रश्न गहन छ । भयो के भने नाम मात्रै ुहिन्दूु रह्यो र हिन्दू दर्शनको साक्षात्कार गर्दै नगरी केवल पाखण्ड ढोँग आडम्बरमा अल्झियौ । लेबल एउटा सामान अर्कै -अनि कसरी सही परिणाम आओस् । अब आवश्यकता के हो भने आन्तरीक तथा बाह्य दुवै तवरबाट हिन्दू दर्शन सँग हाम्रो साक्षात्कार होस् ।
हिन्दू हुन कुनै जाति विशेषमा जन्मनुले गर्दा निषेध छैन । जन्मँदा तपाईं मुसलमान वा कि्रश्चियन हुनुहुन्छ त के भो तपाईं हिन्दू हुन सक्नुहुन्छ । तपाईं जुनसुकै जात-जाति-समुदायको भए पनि हिन्दू हुन सक्नुहुन्छ । चीनिया होस् वा मंगोल होस् वा निग्रो हिन्दू हुने अधिकार सबैलाई छ । यस्तो हो सूर्यमाथि कुन चाहिँ मान्छेको बढि अधिकार छ त्यसको प्रकाश एवम् उर्जामाथि कसको बढी अधिकार छ सबैको । हो त्यसलाई उपभोग गर्न सक्नु-नसक्नु आफुमा भर पर्छ । सूर्य उदायो भने ुकु भन्ने व्यक्तिका लागी उदाउने र ुखु भन्ने व्यक्तिका लागि नउदाउने हुन्छ हुँदैन्ा । त्यही सनातन सूर्य जस्तै हो सनातन धर्म दर्शन । ुकृण्वन्तु विश्वमार्यम्ु भन्छ हाम्रो वेद । सारा विश्वलाई आर्य बनाऊ । आर्यत्व भनेको के त ुअमृतस्य पुत्राःु भनेको छ नि उस्तै हो । ुॐ असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ।ु यही बाटो हो आर्यत्व । आर्य हुनु मानवताको सर्वाेत्तम पद हो ।
धर्मको अन्तदृ्रष्टि सहित विज्ञानलाई हामीले जीवनप्रकि्रयामा आत्मसात् नगरी सुखै छैन । धर्म मान्दै नमान्ने जमात आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । धर्म मान्दैछौं भन्ठान्नेहरुमध्ये पनि अधिकांश धार्मिक सम्प्रदायगत ट्रेडमार्कमा रल्लिइरहेका छन् । अनि एउटा सम्प्रदाय विशेषको कुरा गर्दा पनि आ-आफ्नै तालका रितिमा अल्मलिएका देखिन्छ । अब त्यसरी नरल्लिऔं र सही बाटोमा लागौं भन्ने हाम्रो आह्वान हो । सन्दर्भलाई केन्द्रिकृत गर्दाखेरीमा सवाल कुन चािहं रोज्ने भन्ने हो । धर्म रोज्ने कि अधर्म सत्य रोज्ने कि असत्य उज्यालो रोज्ने कि अँध्यारो जीवन रोज्ने कि मृत्यु क्षणिक सुख रोज्ने कि अक्षय सुख योगवाद रोज्ने कि भोगवाद पूर्व रोज्ने कि पश्चिम निश्चित रुपमा हामी धर्मका पक्षधर हौं । हाम्रो रोजाइ असत्य होइन सत्य हो अँध्यारो होइन उज्यालो हो मृत्यु होइन जीवन हो भोगवाद होइन योगवाद हो क्षणिक सुख होइन अक्षय सुख हो र पश्चिम होइन पूर्व हो । अवैज्ञानिकता हामीलाई अस्वीकार्य छ । हाम्रालागि धर्म भनेको जीवनपद्धति हो -यस्तो जीवनपद्धति जस्लाई वैज्ञानिकताबाट पृथक् राख्न हुंदैन । अस्तु ।
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 1:05 AM0comments links to this post
स्पेसटाइम दैनिक, वर्ष २ अंक १५३, २०५८ चैत २४ गते शनिवार, पेज नं. ४ मा प्रकाशित
वैदिक कालीन राजनीति बारेमा अध्ययन अनुसन्धानको क्रम चलिरहेको छ । संसारकै सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ ऋग्वेदको समयमा राजनीतिक प्रणाली कस्तो थियो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो सामुन्ने सत्ययुगको कुरा आउँछ । सत्ययुगमा मानवसमाजले समस्त अभावहरुमाथि विजय प्राप्त गरेको हुन्छ र समाज भोक रोग शोक रहित हुन्छ । त्यस युगमा राजनीतिक सीमारेखाहरुको अर्थ हुँदैन; संप्रदाय पन्थ मजहबहरुको घेराबन्दीले पनि अर्थ राख्दैन; जाति र भाषाका भेदले पनि अर्थ राख्दैन । त्यहाँ कोही मालिक र कोही दास हुँदैन कोही धनी र कोही गरिब हुँदैन कसैले कसैलाई हैकम चलाउने हुँदैन । सत्ययुगमा प्रहरी र सेनाको आवश्यकता रहँदैन; मानवसमाज स्वतः नैतिक नियममा गतिशील रहने हुन्छ । यहाँसम्मकि तालाचाबीको कुनै उपयोगिता रहँदैन; कोही चोर नै रहने छैन त किन चाहियो तालाचाबी कुनै शस्त्रास्त्रको उपयोगिता नरहने हुन्छ किनकि िहंस्रक मनोवृत्तिबाट मानवले आफूलाई मुक्त पारिसकेको स्थिति हुन्छ । सर्वत्र सुख शान्ति आनन्द । तर अथर्ववेदको समयमा परिस्थिति धेरै फरक भइसकेको देखिन्छ । यस बेलासम्म राष्ट्रको अवधारणा विकसित भइसकेको देखिन्छ र अथर्ववेदमा अनेक राजनीतिक सिद्धान्तहरुलाई स्थान दिइएको देखिन्छ । यहाँ वर्णित राज्य तथा राष्ट्र उच्च आदर्श स्तरमा रहेका छन् । वास्तवमा मानव इतिहासमा मातृभूमिको अवधारणा प्रथम पटक अथर्ववेदमै पाइन्छ । प्रसिद्ध भूमि-सूक्तले नै राष्ट्रियताको अवधारणा विकसित गराएको हो । भूमिसूक्त- १२।१ मा ऋषि पृथ्वीलाई माता र आफू स्वयंलाईचाहिँ उनको पुत्र घोषित गर्दछन्- माता भूमिः पुत्रो अहम् पृथिव्याः । राष्ट्रको अवधारणा साथसाथै राष्ट्रलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने बारेमा पनि अथर्ववेदमा बताइएको छ ।
वेद सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको धर्मग्रन्थका रुपमा सर्वमान्य एवं विख्यात छतापनि यसको असली स्वरुपलाई स्वयं हिन्दूहरुलेनै बुझ्न नसकेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । ज्ञान विज्ञान अध्यात्म धर्म संस्कृति सबैको मूल वेद हुनुले यसको महत्व स्वतः स्पष्ट छ । सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिले उपयोगी विभिन्न संस्थाहरुको मूल पनि वेदमा पाउन सकिन्छ । राष्ट्र राष्ट्ररक्षाको विविध उपाय विभिन्न शासन प्रणाली संस्था तथा सिद्धान्तहरुको उल्लेख वेदमा छ । प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुरुप वैदिक वाङ्मयमा सभा एवं समिति जस्ता संस्थाहरुको व्यवस्था छ । आर्थिक नीतिसिद्धान्तका बारेमा पनि वेदले मार्ग निर्देशन गरेको छ । जीवनलाई राष्ट्रको सम्पत्ति सम्झेर कार्य गर्न वेदमा प्रेरणा दिइएको छ । भनिएको छकि एक राष्ट्रका रुपमा पृथ्वी अनेक जाति अनेक भाषा-भाषी तथा विभिन्न समुदायसम्प्रदायका व्यक्तिहरुलाई एकै घरको समान भरण पोषण गर्दछिन् । अथर्ववेदकालीन राज्यमा पाँच प्रकारका प्रजा रहेको बुझिन्छ - ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र र निषाद । यी सबै पृथ्वीकै सन्तान भएकाले सबैलाई समान अधिकार प्राप्त हुने कुरा अथर्ववेदमा बताइएको छ । अथर्व। १२।१।१५ राष्ट्रमा उँच-नीचको भेद नभएर मित्रता र एकताको भाव होस् । अथर्व। १२।१।२ पारस्परिक फूट कहिल्यै नहोस् । अथर्व। ३।८।१ संगठन सौमनस्यको विस्तार होस्; मिलिजुलि विचार विनिमय होस्; परस्पर सम्पर्क बढाऔं र सबको मन समान होस् । अथर्व। ६।६४।१ सभा कर्म र चित्त सब समान होस्; सब एकताबद्ध भएर कार्य गरौं । सभा समिति सेना र कोशलाई उन्नत बनाउनु प्रजाको कर्तव्य हो किनकि यी राष्ट्रको उन्नतिका साधन हुन् । अथर्व। १५।९।१-२
अथर्ववेद कालमा शासनका विविध प्रणालीहरु प्रचलित रहेका थिए । सम्राट-पद्धति अनुसार सम्राटको आज्ञानै सर्वमान्य हुन्छ । राजा वा सम्राटका लागिपनि नैतिक नियमहरु हुन्छन् र उसले त्यही आधारमा शासन गर्दछ । राजाले प्रजाको रक्षा गर्नु राष्ट्रको उन्नति प्रगति गराउनु र दुष्टहरुलाई दण्ड दिनु पर्दछ । भनिएको छकि आफ्नो दण्ड विधानले नै राजा प्रतापी हुन्छ । अथर्व। ४।८।१ राज्य-शासनकालागि राजा नै सर्वशक्तिमान हुने यो पद्धतिका अलावा अन्य पद्धतिहरु पनि रहेको देखिन्छ । जस्तोकि विराट पद्धतिमा राजा हुँदैनन् र जनता सर्वसम्मति या बहुमतका आधारमा आफ्नो फैसला गर्दछन् । यस पद्धतिमा जो सामुहिक निर्णय हुन्छ त्यहीनै मान्य हुन्छ । स्वराट् पद्धतिमा केन्द्रीय शासन हुन्थ्यो । अथर्ववेदमा स्वतन्त्र राजाकोलागि स्वराट् शब्द प्रयोग गरिएको छ जो आफ्नो तेजस्विताका कारण निर्वाचित हुन्छ । अथर्व। २०।११३।२ जनता यस्तो व्यक्तिलाई चयन गर्दछन् जो इंद्र अर्थात् ऐश्वर्ययुक्त होस् । वृत्र अर्थात् पापी÷अज्ञानी व्यक्तिलाई राजा बनाउने उनीहरुको चाहना हुँदैन । अथर्व। १२।१।३७ प्रजापालक राजानै इष्ट हुन्छ । अथर्व। ४।२२।२३ यस प्रणालीमा जनताका प्रतिनिधि सभा र समितिमा जान्छन् र केन्द्रीय सभा तथा समितिमा उनीहरु राज्य सम्बन्धी नियमहरु बनाउँछन् । यसमा जनताका प्रतिनिधिले राष्ट्रमा शासन गर्ने हुनाले यसलाई जनतंत्र राज्य पनि भनिन्छ ।
राज्यको आयको साधनका सम्बन्धमा पनि अथर्ववेदमा चर्चा गरिएको छ । आयको सोह्र भागको एक भाग करको रुपमा लिइन्थ्यो । कर कति लिने भन्ने कुराको निर्धारण प्रजा तथा प्रजाका प्रतिनिधिहरुले गर्दथे । जनताले राज्यलाई दिनुपर्ने कर छल्ने अहिलेको जस्तो विकृति त्यतिखेर थिएन किनकि कर दिनु पुण्यदायक कार्य मानिन्थ्यो । यसको संकेत अथर्ववेद ३।२९।३ मा पाइन्छ । करबाट प्राप्त धनको उपयोग जनताको पालनकालागि आक्रमणकारीहरुबाट रक्षाकालागि तथा राज्यको संचालनकालागि गरिन्थ्यो । अथर्व। ३।२९।१ राष्ट्रको रक्षाकालागि सेनाको आवश्यकता हुने भएकाले सेनाको व्यवस्था गरिएको र सेनाका २१ प्रकार बताइएको छ । त्यतिबेला सेनामा पुरुषका साथसाथै महिला पनि रहने गरेको बुझिन्छ । अथर्ववेद २।३।१ मा इन्द्रलाई र १।२७।४ मा इन्द्राणीलाई सेनापतिका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । सामान्यतया युद्धलाई ठीक मानिएको छैन तर कसैले आक्रमण गरेमा प्रत्याक्रमण गर्न भनिएको छ । जीवनलाई राष्ट्रको सम्पत्ति सम्झेर कार्य गर्न वेदमा प्रेरणा दिइएको र राष्ट्र-रक्षाकालागि राजा र प्रजा समानरुपेण उत्तरदायी भएको देखिन्छ । सबैको कल्याण गर्ने भावना सत्यको आत्मसातता पदार्थहरुको यथार्थ ज्ञान प्राप्त गरी प्राकृतिक नियमहरुको ठीक-ठीक पालना आस्तिकता धर्ममय आचार-व्यवहार वैदिक राजनीतिका आधारका रुपमा स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । अस्तु ।
# posted by Dr. Nirmala Mani Adhikary @ 1:39 AM0comments links to this post